04 | March | 2020 | Danya Wadi
By danyawadi March 4, 2020 Leaveacomment
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်အဆင့် ရောက်ရှိနေပြီဟု WHO ကြေညာ ရုပ်သံ PropellerAds Create The Girls You Have Always Wanted To See Naked ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုဟာ အမြင့်ဆုံး သတိပေးမှုအဆင့် ရောက်ရှိလာပြီလို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲ တက်ဒရော့်စ် အဒါနွမ်ဂျီဘရီယီးဆပ်က “ဒီအရာဟာ ဘယ်နေရာကိုမဆို သွားနိုင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အန္တရာယ်ကို လျှော့မတွက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်ဟာ အရမ်း မြင့်လာ ပြီ။www.Innlaymedia.com | Innlay Media ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အန္တရာယ် […]
2020-03-03 Nigare Abdushukur, in an undated photo. Social media The mother and daughter ofawealthy Uyghur family in northwest China’s Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) have been sentenced to lengthy jail terms related to their overseas connections, according to family members who live abroad and local officials. Earlier this year,aUyghur exile in […]
Myanmar authorities seizeaboat carrying Rohingya Muslims from Rakhine state en route to Malaysia, off the coast of Dawei district in southern Myanmar’s Tanintharyi region, Nov. 25, 2018. Photo courtesy of Tanintharyi Regional Police Force Myanmar authorities have apprehended more than 2,200 Rohingya Muslims as they attempted to illegally leave the country by sea […]
DMG နှင်းနွယ် | DMG မတ် ၂ ၊မြောက်ဦး ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ မြောင်းဘွေကျေးရွာအနီး ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲအပြီး လူ (၁၃)ဦး ပျောက် ဆုံးခဲ့ရာ ယင်းအထဲမှ အမျိုးသားသုံးဦး၏အလောင်းကို ယနေ့ မတ်လ ၂ ရက်နေ့က တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဒေသခံ များထံက သိရသည်။ အဆိုပါ ရုပ်အလောင်းများကို မြောင်းဘွေကျေးရွာမှ တစ်မိုင်ခန့်အကွာ ရှမ်းတောင်ကျေးရွာအနီးရှိ တံတား aအာက်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူများမှာ လက်သန်းချေကျေးရွာမှ ကိုမောင်ကျော်ခိုင်(၃၆ နှစ်) ၊ ကျွဲတဲကျေးရွာမှ ကိုမောင်သန်းဌေး (၃၉ နှစ်)နှင့် ဘူးတလုံးမွတ်ဆလင်ကျေးရွာမှ ဟာဘီအာလောင် (၅၂ နှစ်)တို့ ဖြစ်သည်။ “သူတို့အလောင်းတွေကို ရှမ်းတောင်မှာနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေက စတွေ့တာ။ အလောင်းတွေက ရုပ်တွေ ပျက်နေပီ။ […]
Baharain New Agency 03 Mar 2020 OIC Committee discusses Rohingya Minority with UNGA President New York, Mar.3(BNA): Saudi Permanent Representative to the United Nations, Ambassador Abdullah bin Yahya Al Muallami, and the permanent delegates of the International Minor Committee on Rohingya Muslims in Myanmar met on Monday with Ambassador Tijjani Muhammad the President […]
bdnews24.com News Desk, bdnews24.com Rohingya refugee children fly improvised kites at the Kutupalong refugee camp near Cox’s Bazar, Bangladesh Dec 10, 2017. REUTERS/FILE United Nations agencies and NGO partners have appealed for $877m for about 855,000 Rohingya refugees from Myanmar and 444,000 vulnerable Bangladeshis. The 2020 Joint Response Plan, or JRP, for the Rohingya humanitarian […]